ख्रीष्‍टमसको चिठी – NepalChurch.com
in Articles, Bible Study & Teaching
प्यारो मित्र बिर्खे,
धेरै-धेरै सम्झना र माया!
समय पनि कति चाडो बितेको होला, पौष महिना शुरू भएको थाहै भएन! जे होस्, तिम्रो परीवार तिर सबै ठिकै होला भन्ने आशा लिएको छु । यता तिर हामीहरू सबै कुशल-आरामै छौं ।अं, गएको बेला तिमीले ख्रीष्टमसको बारेमा केहि प्रश्न गरेका थियौं तर समयको अभावले तिमीसँग कुरा गर्न नै पाईन । अब यहि पत्रबाट ख्रीष्टमसको बारेमा तिमीलाई केहि लेख्न चाहन्छु ।
नेपालमा पौष लाग्यो की ख्रीष्टमसको कुरा शुरु भईहाल्छ । तर दुखको कुरा धेरै नेपालीहरूले यसको वास्तविकता बुझेकै छैनन् । अब के कुरा गर्नु, फेरी नेपाली ख्रीष्ट्यनहरुले पनि बुझ्नु आवश्यक छ ! हेर न, गएको सालमा हाम्रै शहरमा ख्रीष्टमसको बेला ख्रीष्ट्यनहरुले गाऊ-गाऊका चर्चबाट मानिसहरुलाई बजारमा भित्र्याएका थिए । किन यसो गरेको होला भनि मैले एकजना ख्रीष्ट्यनलाई सोधे, र उहाँले यसो भन्नुभयो, “हाम्रा ख्रीष्ट्यनहरू कति छन भनि मानिसहरुलाई थाहा हुनुपर्यो नि, राजनैतिक नेताहरुलाई हाम्रो पावर पनि थाहा लागोस् नी !” मलाई ती अगुवालाई देखेर दया पलायो, र पक्कै उहाँको सोच देखेर येशू ख्रीष्ट पनि टिठाउनु हुन्थ्यो होला ।
तर जे होस् म तिम्रो प्रश्नको जवाफ दिन तिर लाग्छु । ख्रीष्टमस के हो? यो कहिले देखी शुरुवात भयो? के ख्रीष्टमससँग येशू ख्रीष्टको केहि सम्बन्ध छ त ? के ख्रीष्ट्मस मनाउनका निम्ति येशू ख्रीष्टले आज्ञा गर्नुभएको थियो ? यस्तै-यस्तै बिषयमा रहेर तिमीलाई ख्रीष्ट्मसको बारेमा प्रष्ट पार्ने प्रयास गर्नेछु ।
यद्दपी ख्रीष्टमस भन्नाले येशू ख्रीष्टको जन्मलाई झल्काएता पनि हाम्रो समाज अर्थात चर्चमा देखिने चमक-झमकसँग येशू ख्रीष्टको कुनै सम्बन्ध नै रहेको पाईदैन । पहिलो कुरा, सान्टा क्लाउज । ख्रीष्ट्मस ताका सान्टा क्लावजको पहिरनमा मानिसहरू देखिने गर्छन । अख्रीष्ट्यनहरुले यसो गर्दा के पो नै भन्न सकिन्छ । उनीहरूले नबुझेकाले यसो गरे होलान भन्न सकिन्छ । तर केहि नेपाली ख्रीष्ट्यनलाई के भाको होला? अझै हाम्रो गाऊँमा सान्टा क्लाउज लगाउदै ख्रीष्ट्यनहरू ख्रीष्टमस मनाएको देख्दा मलाई अचम्भ लाग्छ बा ! ए बाबा, के को बिदेशी तरिका सिक्नु परेको होला? त्यो रातो सान्टासँग येशूको के लेनदेन ? यो सान्टा भनेको के हो भनि तिमी अचंभ मानौला! त्यो पनि प्रष्ट पार्न चाहन्छु । चौथौ शताब्दिमा एक जना मानिस – निकोलसको जन्म भएको थियो । उनी पछी गएर लुसियाको बिषप भए पछी उनलाई सेन्ट (पवित्र) निकोलस भन्न थालियो । उनले समाज सेवा गरेर धेरै नै ख्याति प्राप्त गरेका थिए। कालान्तरमा गएर रोमन क्याथोलिक चर्चले उनलाई सन्तको रुपमा पुज्न नै थाल्यो । युरोपियन एंव उत्तरी अमेरिकाका देशहरूमा डिसेम्बर ६ का दिन निकोलसको पर्व मानिन्छ । मानिसहरुको पहिलेको परम्परालाई निरन्तरता दिनका निम्ति त्यसबेलाका नयाँ ख्रीष्ट-विश्वासी झुण्डमा यो पर्वले येशू ख्रीष्टको जन्मको यादमा “ख्रीष्टमस” मनाएको पाईन्छ । याद गर, बाईबलमा कतैपनि ख्रीष्टमसको बारेमा चर्चा गरेको पाईदैन र येशू ख्रीष्टको जन्मसँग यसको कुनै सरोकारै छैन, न ता यसले येशू ख्रीष्टको जन्म डिसेम्बर २५ मा भएको हो भनि भन्दछ । यो त अन्य धर्म र विश्वासबाट लिएको पाईन्छ ।
दोस्रो कुरा, ख्रीष्टमस रूख । यो पनि येशू ख्रीष्टले शुरुवात गरेको होइन । यसको शुरुवातलाई मिश्र र ग्रीकहरूको संस्कृतिसँग जोडिएको छ । अझ भन्नु पर्दा ईतिहासलाई कोट्याउदै जाने हो भने ख्रीष्टमस ट्री – जर्मनी बाट, ख्रीष्टमस कार्ड- इङ्गल्याण्ड बाट र सान्टा क्लावज चाहि -अमेरिकाबाट भित्रिएको हो । यसको बाईबल र येशू ख्रीष्टसँग केहि सम्बन्ध राख्दैन । पछी गएर यूरोपले यो परम्परालाई ख्रीष्टमससँग जोडिदियो । अब हामी नेपालीहरुले यो विदेशी परम्परालाई किन जोड दिनुपरेको होला ! सायद त्यसैले हामीलाई विदेशी धर्म मान्ने भनि आरोप लगाईन्छ ।
बाईबलमा ख्रीष्टमस शब्द नभएपनि यसको बारेमा के भन्छ भनि तिमीलाई उत्सुकता लागेको होला । बाईबलमा एकजना वृद्ध व्यक्ति शिमियोन जसले यरुशलेमको मन्दिरमा येशू ख्रीष्टलाई पर्खिरहेका थिए ।(लूका २ :५-३२) उनको ख्रीष्टमस मनाउने तरिका अलि फरक थियो । उनले भनेका तीन शव्दहरुको बारेमा केहि कुरा तिमीलाई पनि भन्न मन लाग्यो । संसार अचम्मको छ, मित्र ! हरेक दिन विश्वमा जतासुकै लडाई, द्धन्द्ध, बम-बारुद, मृत्यूको खबरले नै समचार-पत्रहरु भरिएका हुन्छन् । सबैलाई भविष्यको डर र चिन्ता छ । तिमीलाई पनि आप्नो भविष्यको चिन्ता त निश्चय नै होला । बाइबलमा शिमियोनले खीष्टलाई भेट्दा आफुमा शान्तिको अनुभुति गरेका थिए । संसारले दिने शान्ति क्षणिक हुन्छ तर परमेश्वरले दिने शान्ति अनन्तको हुन्छ । यो शान्ति हराएर जादैन र मानिसले कमाउन पनि सक्दैन । तर यो परमेश्वरले मानिसलाई सित्तैमा दिनुहुन्छ । आज मानिसहरु शान्ति र आनन्द पाऊनका निम्ति विभिन्न असल कामहरु गर्दछन् । तर हाम्रा असल कामहरुले परमेश्वरको शान्ति पाउन सक्दैनौ । शिमियोनले ख्रीष्टलाई भेटदा उद्धारको अनुभव पनि गरेका थिए – दोस्रो महत्वपुर्ण सत्यता । के यो ख्रीष्टमसमा हामीले पनि त्यो मोक्ष वा उद्धार पाएका छौ ? यो गहिरो प्रश्न म तिमीसीत गर्न चाहन्छु । उद्धारको अनुभव बिना ख्रीष्टमस मनाउनुको कुनै अर्थ रहदैन । मानिस जन्मिदा नै पापी स्वभावमा जन्मेको हुन्छ । त्यसैले मानिसलाई पापबाट छुटकारा दिनको लागि येशू यस संसारमा आउनु भएको हो । यहि सत्यतालाई याद गर्नका लागि नै हामी सबै ख्रीष्टमस मनाउछौं । तर यदि उहाँको उद्धारलाई पाएका छैनौ भने ख्रीष्टमस उत्सव मनाउनुको के नै पो अर्थ रहयो र ! अन्त्यमा शिमियोनले येशूको आगमनलाई “मानव जातीलाई मार्गदर्शन (ज्योति) गर्नका निम्ति हो” भनेका छन् । हेर मित्र, मानिसको ज्ञान र बुद्धिले योजना सम्म गर्नसक्ला तर त्यो योजनाको बाटो तयार गरिदिने त परमेश्वरमात्र हुनुहुन्छ । मानिस कहिल्यै अध्यारोमा हिड्न सक्दैन । हिड्नका निम्ति ज्योती वा प्रकाशको आवश्यकता पर्दछ । येशू ख्रीष्ट संसारको ज्योति हुनुहुन्छ । जब हामी अन्यौलमा हुन्छौ उहाँले हामीलाई सही बाटो देखाउनु हुन्छ । हामी बेचैन भएको बेलामा उहाँको शान्तिले हाम्रो हृदय भर्नुहुन्छ । आजभोलि धेरै मानिसहरुले ख्रीष्टमसको वास्तविक अर्थ नै नबुझि ख्रीष्टमस मनाईरहेका छन् । कत्तिले लहैलहैमा २५ डिसेम्बर को दिनलाई मिठो-मिठो खाने, राम्रो-राम्रो लगाउने र रमाईलो गरी मनाउनेमा मात्र सिमित राखेका हुन्छन् । कति परीवारमा ख्रीष्टमसले ॠण बोकाएर गईदिन्छ । त्यस्तो पश्चिमी सभ्यताको लहैलहैमा नेपाली ख्रीष्ट्यन नअड्केको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ । ख्रीष्टको उद्धार पाएर ख्रीष्टमस मनाउनुको आनन्द नै बेग्लै हुन्छ । अन्त्यमा, परमेश्वरले तिमी र तिम्रो परिवारमा पनि ख्रीष्टको शान्ति, उद्धार एंव ज्योती ल्याउनुभएको होस् भनि प्रार्थनाका साथ बिदा चाहन्छु ।
परमेश्वरले तिमीलाई आशिष दिनुभएको होस् ।
उहि हितैषि मित्र
डिभाइन पार्टनरसिप मिनिस्ट्रीद्वारा क्रिसमस कार्यक्रम आयोजना गरिने
ख्रीष्टमस सार्वजनिक छुट्टीको लागी जोडदार माग